सच्चा ओली सडकमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा भन्दै प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ परे ! हेर्नुहोस आज असोज ११ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
सच्चा ओली सडकमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा भन्दै प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ परे ! हेर्नुहोस आज असोज ११ गतेका मुख्य समाचारहरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । माइतीघर मण्डलामा मध्याह्न भेला भएर प्रदर्शन गरेका युवाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रदर्शनकारीले बोकेको प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर अंकित पोस्टरमा ‘सच्चा ओली सडकमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा’ लेखिएको थियो ।
प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरु हुन् । डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेको उनीहरुले बताएका छन् । यो संगै आज असोज ११ गतेका मुख्य समाचारहरु तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :